စာအုပ် | Thaing Wizard | Page 2
Tag Archives: စာအုပ်
Posted on March 2, 2014 by Aung Thu Htet
ဒီတင်ခါတော့ သိုင်းချစ်သူ မိတ်ဆွေများအတွက် နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း၊ သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းနှင့် အဌာရဿမဂ္ဂဇင်းများမှ သိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို စုစည်းတင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ ပဏာမအနေနဲ့ ၎င်းဆောင်းပါးများကို အပင်ပန်းခံ scan ဖတ်ပေးခဲ့သော ကိုစိုးကြီးအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ကိုစိုးကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်သာ ဒီကနေ့ ဆောင်းပါးများကို တင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ တင်ပေးဖြစ်တဲ့ စာအုပ်စာရင်းကို ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်ဖြင့်…
၁။ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ကြေးစားလက်ဝှေ့ကျော် မောင်သောင်း (ဥာဏိန္ဒ)
၂။ ဂျူဒို ထွန်းရွှေ (ကြည်ဝင်း)
၃။ လက်နက်ဂမ္ဘီရ (ဖုန်းရွှီအောင်)
၄။ ဓား၏လျှို့ဝှက်ချက်များ (ရှိုင်းအောင်)
၅။ မြန်မာ့နန်းတွင်း မြင်းခင်းပွဲတော် (မြေလတ်မြတ်သူ)
၆။ ကရာတေးဘိုးအေ… ရှောင်လင် သိုင်းပညာ (ကြည်ဝင်း)
၇။ တစ်ကိုယ်တော်ရိုနင် (အောင်ကျော်)
၈။ ဓားဝိဇ္ဇာ မူဆာရှိ၏ ဓာတ်ကြီး(၅)ပါးကျမ်းတော် (ဒီပံလင်း)
ဆိုပြီး ဆောင်းပါး(၈)ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို ebook တစ်ခုစီ လုပ်ထားပေးပါတယ်။ စာအုပ်များကို အောက်မှာ download ဆွဲယူနိုင်ပါပြီဗျာ။
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ကြေးစားလက်ဝှေ့ကျော် မောင်သောင်း (ဥာဏိန္ဒ)
ဂျူဒို ထွန်းရွှေ (ကြည်ဝင်း)
မြန်မာ့နန်းတွင်း မြင်းခင်းပွဲတော် (မြေလတ်မြတ်သူ)
ကရာတေးဘိုးအေ… ရှောင်လင် သိုင်းပညာ (ကြည်ဝင်း)
ဓားဝိဇ္ဇာ မူဆာရှိ၏ ဓာတ်ကြီး(၅)ပါးကျမ်းတော် (ဒီပံလင်း)
Posted in Bando, Banshay, Boxing, Jiu-Jitsu, Judo, Karate, Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Article, Martial Arts Book, Pwe Kyaung	| Tagged ကရာတေး, ကွန်ဖူး, ဂျူဂျစ်ဆု, ဂျူဒို, စာအုပ်, ဒီပံလင်း, ပွဲကျောင်း, ဖုန်းရွှီအောင်, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, လက်ဝှေ့, ဥာဏိန္ဒ, ဆောင်းပါး, အောင်ကျော်, မြေလတ်မြတ်သူ, ကြည်ဝင်း, ရှိုင်းအောင်	|2Replies
Posted on February 25, 2014 by Aung Thu Htet
ဒီတစ်ခါတော့ အရပ်မြင့်နည်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးနဲ့ စာအုပ်တွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ဆရာထိပ်တင်ထွဋ်ရဲ့”၁၄-ရက်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်း” စာအုပ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် တစ်ချို့ တင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိုင်းပညာနဲ့ မပတ်သတ်တာကြောင့် post အနေနဲ့ သပ်သပ် မတင်ဖြစ်ပဲ ဒီတိုင်းပဲ upload လုပ်ပြီး link တင်ထားရုံပဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့တော့ စာအုပ်အသစ်တွေ ထပ်လုပ်ဖြစ်တာကြောင့် အရင်စာအုပ်တွေရော၊ စာအုပ်အသစ်တွေပါ post ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သိုင်းပညာနဲ့ မပတ်သတ်လှပေမယ့် အရပ်မြင့်လိုသူ လူငယ်များအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
စာအုပ်အသစ်တွေ ထပ်လုပ်ဖြစ်တာကတော့ ကိုစိုးကြီး ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်ဆီကို အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်နှစ်အုပ်နဲ့ ဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ် scan ဖတ်ပြီး ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမင်းစံအိမ် ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ “အရပ်ရှည်ထွက် မြင့်တက်ဖို့” စာအုပ်၊ “အရပ်ရှည်ထွက် ဖြောင့်မတ်တက်ဖို့” စာအုပ်၊ နောက် ဆရာဝဇီရ ရဲ့ “အရပ်မြင့်မားစေဖို့ ယောဂကျင့်စဉ်” ဆောင်းပါး၊ ဆရာမောင်မိုးဆောင်း(ဒိုက်ဦး) ရဲ့ “အရပ်ရှည်လိုသူ လူငယ်များအတွက် လမ်းညွှန်ပေးပါရစေ” ဆောင်းပါး စတာတွေ ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို အောက်မှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ရှည်ထွက် မြင့်တက်ဖို့ (မင်းစံအိမ်)
ဆရာမင်းစံအိမ် ဘာသာပြန်တဲ့ “အရပ်ရှည်ထွက် မြင့်တက်ဖို့” စာအုပ်ရဲ့ အကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မူရင်းရေးသားပြုစုသူ မစ္စတာ ရန်စုဝိန်ဟာ တရုတ်ရိုးရာ အနှိပ်ပညာနဲ့ အရပ်မြင့်နည်းဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ထုတ်ဝေပြီး စာအုပ်တွေထဲမှာ ယခု ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေထားတဲ့ “အရပ်ရှည်ထွက် မြင့်တက်ဖို့” စာအုပ်ဟာ လူကြိုက်များလွန်းလို့ ရောင်းမလောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဆရာမင်းစံအိမ်က ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့ရာမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ် နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ထုတ်ဝေခဲ့တာတောင် ယခုအချိန်မှာ လိုချင်လို့ ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင် ရှာမတွေ့နိုင်တော့လောက်အောင် ရှားသွားပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ယခု ထိုစာအုပ်ကို ebook ပြန်လည် ပြုလုပ်ဖြန့်ဝေပါတယ်။ ဒီမှာ download ရယူပါ။
အရပ်ရှည်ထွက် ဖြောင့်မတ်တက်ဖို့ (မင်းစံအိမ်)
ဆရာမင်းစံအိမ်ပဲ ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “အရပ်ရှည်ထွက် ဖြောင့်မတ်တက်ဖို့” စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမစာအုပ် “အရပ်ရှည်ထွက် မြင့်တက်ဖို့” ကို ထုတ်ဝေပြီး သိပ်မကြာခင် ၂၀၀၈ မှာ ထပ်မံ ထုတ်ဝေပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ပါ။ မူရင်းစာအုပ်က ဟောင်ကောင် “သာလျင်စာပေတိုက်”ထုတ် “Look, I Am Growing Taller” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာလည်း နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီး ဆရာဝန်တွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေက အကြံပြုထားတဲ့ အရပ်ရှည်ရေး နည်းလမ်းတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကို စုစည်းပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာလည်း ဈေးကွက်မှာ မရှိသလောက် ရှားသွားပါပြီ။
အဆိုပါ စာအုပ်ကို ဒီမှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ။
၁၄-ရက်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်း (ထိပ်တင်ထွဋ်)
ဆရာထိပ်တင်ထွဋ်ရဲ့ “၁၄-ရက်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်း” စာအုပ်ကတော့ ebook လုပ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ စာအုပ်အသစ်တွေတင်ရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်းပဲ download ယူလို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အထွေအထူးတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ဟိုတစ်လောကတော့ ဒီစာအုပ်ပါ ကစားနည်းအတိုင်းကစားပြီး အရပ်နှစ်လက်မ တိုးလာတယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်တွေ့ ကစားကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့…။.စာအုပ်ကိုတော့ ဒီမှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ။
အရပ်မြင့်မားစေဖို့ ယောဂကျင့်စဉ် (၀ဇီရ)
ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေရုံမက အရပ်မြင့်မားစေဖို့ပါ အထောက်အကူပေးနိုင်ကြောင်းကို ယခုဖော်ပြပါ “အရပ်မြင့်မာစေဖို့ ယောဂကျင့်စဉ်” ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Download ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ပါ။
အရပ်ရှည်လိုသူ လူငယ်များအတွက် လမ်းညွှန်ပေးပါရစေ (မောင်မိုးဆောင်း-ဒိုက်ဦး)
အရပ်ရှည်လိုသူ လူငယ်များအတွက် လမ်းညွှန်ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ Download ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ပါ။
ဒါကတော့ အရင်ကတည်းက တင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို အရပ်ရှည်နည်းလေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်တွေပါ။ ဒီမှာ တစ်ခါတည်း ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Height Gain Exercises
Download (File Size – 1.02 MB)
2. Exercises for Growing Taller – A Mini Guide (Rodney Williams)
Download (File Size – 600 KB)
3. How to Naturally Increase your Height 2-3 Inches within7Weeks
Download (File Size – 461 KB)
4. Stretches To Grow Taller
Download (File Size – 111 KB)
Posted in Growing Taller Article, Growing Taller Exercise, Growing Taller Exercise Book	| Tagged စာအုပ်, ထိပ်တင်ထွဋ်, မင်းစံအိမ်, အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်း, ဆောင်းပါး
Posted on February 19, 2014 by Aung Thu Htet
ဒီကနေ့တော့ ၁၉၆၉-ခုနှစ်က ဆရာကြီး ဦးပြည်သိမ်း ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့သော လျှို့ဝှက်သော ကမ္ဘာ့သတ်ပုတ်နည်းများ စာအုပ်မှ “ချီ”အားတိုးအောင် ကျင့်နည်းများ (A Method of Increasing Chi) ကို ဆောင်းပါးကို ebook ပြုလုပ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်က scan ဖတ်ပြီး ebook လုပ်မယ်ဆိုရင် အဖုံးချွတ်ပြီးလုပ်မှ အဆင်ပြေမှာမို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စာပြန်ရိုက်ပြီး တင်ပေးလိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းစာအုပ်အတိုင်း မပြင်မဆင် မဖြည့်စွက်ဘဲ (သတ်ပုံအချို့ပြင်ဆင်သည်မှလွဲ၍) ဆရာကြီး ဘာသာပြန်ခဲ့သည့်အတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အဆိုပါစာအုပ်၏ မူရင်းမှာ John F. Gilbey (Robert W. Smith [1926-2011]) ၏ Secret Fighting Arts Of The World ဖြစ်ပါသည်။ နောင်များမှာမှ အခွင့်အခါသင့်လျှင် အဆိုပါ ဘာသာပြန်စာအုပ် တစ်အုပ်လုံးကို စာစီရိုက်ပြီး ebook ပြုလုပ်ပေးပါဦးမည်။
ကျွမ်းကျင်လိုက်စား၊ သိုင်းသမား။ ။
“ချီ”အားတိုးအောင် ကျင့်နည်းများ (ဦးပြည်သိမ်း)
“ချီ”သည် အရှေ့တိုင်း သိုင်းသမားများ အရင်းအမြစ် ထား၍ လေ့လာသင်ကြားကြသည့် အတတ်ပညာဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် “ချီ”အပေါ် အမြင်ခြင်း မတူကြပေ။ အမြင်ခြင်း မတူကြ၍ လေ့ကျင့်ပုံလည်း မတူကြပေ။
တရုတ်ပညာရှင်များ “ချီ”ကို လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အသုံးချခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ်ကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းမှုမျိုး ရရန်အတွက် ဖြစ်၏။ “ချီ”သည် ၀မ်းတွင်းရှိ မွေးကတည်းက ပါလာသော မွေးသန္ဓေပါ ဖြစ်၏။
“ချီ”သည် အတွင်းစွမ်းအား ဖြစ်၏။ ၎င်းစွမ်းအား တိုးတက်လာစေအောင် မည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်ကို ဤစာအုပ်က ရေးသားဖော်ပြထား၏။
အချို့က “ချီ”ဟု ခေါ်၏။ အချို့က “ခီ”ဟု ခေါ်၏။ အချို့က “ကီ”ဟု ခေါ်၏၊ အရှေ့တိုင်း သိုင်းသမားများ အထူးသဖြင့် ဂျပန်၊ တရုတ်ပြည်နှင့် ကိုရီးယားပြည်မှ သိုင်းသမားများ လျှို့ဝှက်စွာ ကျင့်နည်းအတတ် ဖြစ်၏။ မြန်မာက သိဒ္ဓိတိုးနည်း၊ မှော်သွင်းနည်းဟု ခေါ်၏။ သမထထိုင်နည်းနှင့် ဆင်ဆင်တူ၏။
ဤသိုင်းသမားများ လျှို့ဝှက်ထားသည့် “ချီ” အားတိုးအောင်ကျင့်နည်းကို ယခုဖော်ပြပါ စာအုပ်တွင် လေ့လာပါ။ ဒီနေရာမှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ။
File Size – 1 MB (849 KB)
Posted in Inner Engrgy, Martial Arts, Martial Arts Book, Meditation	| Tagged ကရာတေး, ကွန်ဖူး, စာအုပ်, တရားထိုင်ခြင်း, ထိုက်ကျိချွမ်, ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, အတွင်းအား, အာကီဒို, ဦးပြည်သိမ်း, ရှောင်လင်	| Leaveareply
ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန် အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ
Posted on November 22, 2013 by Aung Thu Htet
ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်၏ အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ http://khukhachant.per.mm/ ကနေ ကူးယူထားတာပါ။ အဲ့ဒီ website လေးကတော့ အခု မရှိတော့ပါ။ ၀ါသနာရှင်များ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ebook ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်၏ အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ
ဖော်ပြပါစာအုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အခန်းများကတော့…
(၁) ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်၏ သမိုင်းစဉ်
(၂) သိုင်းပြောင်းပြန်နာယကဆရာကြီး ဦးမောင်လေး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်နှင့်
(၃) ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်၏ အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ
သိုင်းပြောင်းပြန် အခြေခံကျင့်စဉ်များမှာ- အခုန်ကျင့်နည်းစနစ်၊ လက်နည်းစနစ်၊ တုတ်နည်းစနစ်၊ ဓားနည်းစနစ် စသည်ဖြင့် အတော်စုံစုံလင်လင်ပါပါတယ်။ အခြေခံကျင့်စဉ်ဟု ဆိုထားသော်လည်း အခြေခံတိုက်ခိုက်နည်းစနစ်များသာမက ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုအတွက် မဖြစ်မနေလေ့ကျင့် ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်နေပါတယ်။
(File Size – 843 KB)
ဖော်ပြပါ စာအုပ်ကို download ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ပါဗျာ။ ယခုစာအုပ်အပြင် အခြားသော သိုင်းပြောင်းပြန်စာအုပ်များ၊ သိုင်းစာအုပ်များကို download ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ သွားရောက် ကူးယူနိုင်ပါကြောင်း…
သိုင်းပြောင်းပြန် Website များ…
International Thaing Byan Association: http://itbba.org/
Thaing Byaung Byan (Mandalay): http://thaingbyaungbyan.blogspot.com/
သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Facebook Account နဲ့ Fan Page များ…
Khukhachant Martial Art,
ခူးကာချန့် – သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်း TBB Ku Kar Chant,
သိုင်းပြောင်းပြန်ပုသိမ်. Thaing Byaung Byan Pathein,
ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန် – Thaing Byaung Pyan
Posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book, Pwe Kyaung, Thaing Byaung Byan	| Tagged စာအုပ်, ဆရာချယ်, ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, သိုင်းပြောင်းပြန်, ဦးအောင်သိန်း(သန်လျင်)	| Leaveareply
သိုင်းစာအုပ်များ အလွယ်တကူ ၀ယ်နိုင်ပြီ…
Posted on November 18, 2013 by Aung Thu Htet
သိုင်းပညာရပ်ကို ၀ါသနာပါသူ မိတ်ဆွေများအတွက် အထူးစပါယ်ရှယ်သတင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ… မကြာသေးခင်က အသစ်ထွက်ထားတဲ့ ပွဲကျောင်းဆရာကြီးဦးစိုးမြင့်ရဲ့ ပွဲကျောင်းစာအုပ်နဲ့ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ ၁၉၉၀ နှစ်များဆီက ထွက်ထားခဲ့တဲ့ သိုင်းစာအုပ်များကို ၀ယ်ယူလို့ရနိုင်ကြောင်းပါ…
မြန်မာနိုင်ငံသိုင်းအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာ့သိုင်းပင်မဦးစီးဆရာကြီး တိုက်တိုင်းအောင် ပွဲကျောင်းဆရာကြီး ဦးစိုးမြင့် ရေးသားပြုစုသော…
မူလဂါမ၀ါသီပုပ္ပား ပွဲကျောင်း မြန်မာ့သိုင်းလက်ဝှေ့လေ့ကျင့်ကစားနည်း၊ တန်ပြန်ခုခံကာကွယ် တိုက်ခိုက်နည်း စာအုပ်ကို အမြို့မြို့ အနယ်နယ်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းတွင် ရနိုင်ပြီ။
မူလဂါမ၀ါသီပုပ္ပား ပွဲကျောင်း မြန်မာ့သိုင်းလက်ဝှေ့လေ့ကျင့်ကစားနည်း၊ တန်ပြန်ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နည်း
ထုတ်ဝေချိန် -၂၀၁၃ မတ်လ
တန်ဖိုး – ၁၈၀၀ ကျပ်
နယ်မှ ၀ယ်ရခက်နေသူများဖြစ်ပါက http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/29492/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
ဖော်ပြပါစာအုပ်ကို ကနဦးက ebook ပြန်လုပ်ရန် စဉ်းစားခဲ့ဖူးသော်လည်း ဈေးကွက်တွင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့် ebook မလုပ်ဖြစ်တော့ပါ။ လုပ်ဖြစ်ပါကလည်း တစ်ချို့စာမျက်နှာများကိုသာ လုပ်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကာလသည် သိုင်းစာအုပ်ဈေးကွက် မရှိသော ကာလဖြစ်သဖြင့် ebook ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ဈေးကွက်ပျက်သွားကာ နောင်အသစ်ထွက်ပေါ် လာလတ္တံ့သော စာအုပ်များတွင်လည်း မည်သူမျှ အရှုံးခံထုတ်ေ၀၀ံ့တော့မည်မဟုတ်တော့ပါ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြစေလိုပါသည်။
ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့် ဘာသာပြန်သော လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ၊ Self Defence In Every Emergency စာအုပ် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ…
လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ၊ Self Defence In Every Emergency (မြန်မာပြန်)
အကြိမ် – ဒုတိယအကြိမ်
ထုတ်ဝေချိန် – ၁၉၉၀ နိုဝင်ဘာလ
တန်ဖိုး – ၁၅၀၀ ကျပ်
ရန်ကုန်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ၊ နယ်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/18354/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
အဆိုပါစာအုပ်ကို download ရယူလိုပါက https://thaingwizard.wordpress.com/2013/02/27/self-defence-in-every-emergency-book/ မှာယူပါ။
ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့် ဘာသာပြန်ခဲ့သော ထိုင်း လက်ဝှေ့၊ Thai Boxing စာအုပ် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ…
ထိုင်း လက်ဝှေ့၊ Thai Boxing (မြန်မာပြန်)
အကြိမ် – တတိယအကြိမ်
ထုတ်ဝေချိန် – ၁၉၉၅ မေလ
တန်ဖိုး – ၁၂၀၀ ကျပ်
ရန်ကုန်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ၊ နယ်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/13489/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
အဆိုပါစာအုပ်ကို download ရယူလိုပါက https://thaingwizard.wordpress.com/2013/02/21/thai-boxing-book/ မှာယူပါ။
အဆိုပါ website တွင် အခြားသော ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့်၏ စာအုပ်များ ကြော်ငြာထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ဆက်သွယ်ကြည့်သောအခါတွင် ယခုဖော်ပြပါ စာအုပ်များသာ ရနိုင်တော့သည်ဟု သိရပါကြောင်း…
အော်… မေ့လို့ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ ဂျီကွန်ဒို စာအုပ်လည်း ရသေးတယ်ဗျ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၀၀၀-ကျပ် ပါ။
တန်ဖိုး – ၁၀၀၀ ကျပ်
ရန်ကုန်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ၊ နယ်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ http://www.myanmaronlinesales.com/MyanmarBooks/BookDetails/6384/ တွင် မှာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူများ www.myanmarbookshop.com/ တွင်မှာပါ။
အဆိုပါ ဂျီကွန်ဒို ebook ကို download ယူမယ်ဆိုရင် https://thaingwizard.wordpress.com/2013/02/28/jeet-kune-do-book/ ဒီမှာပါဗျာ…
Posted in Martial Arts Book, News, Pwe Kyaung	| Tagged ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, စာအုပ်, ပွဲကျောင်း, ပွဲကျောင်းဦးစိုးမြင့်, သတင်း	|9Replies
Posted on May 31, 2013 by Aung Thu Htet
ဆရာကြီး ဦးချစ်သန်း ရေးသားခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ စာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာတို့၏ ရှေးဟောင်းကာကွယ်တိုက်ခိုက်မှု စစ်ပညာ ဖြစ်ရုံသာမက ရိုးရာအားကစား ပညာလည်းဖြစ်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် အတတ်သည် တာဝန်သိသော သိုင်းပညာရှင်များ၏ လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် ယနေ့ခေတ် နှောင်းလူများ တွေ့ရှိသိမှတ် သင်ကြားနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပညာကို အားပြတ်အောင် မပြုနှင့် ဟူသော ဆိုရိုးအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ့ ဆရာများ၏ တာဝန်ကျေမှုများကြောင့် ဤပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ သင်ကြားခွင့် ရနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပညာတစ်ခုကို ငါမှလွဲ၍ ငါ့သားသမီး၊ ငါ့တပည့်ရင်းမှလွဲ၍ မည်သူမှ မတတ်ရ၊ မသိစေရ၊ မမြင်စေရ ဟူသော အယူအဆသည် များစွာ ကျဉ်းမြောင်းလှပေသည်။ မိမိချစ်မြတ်နိုးသော ပညာရပ်တစ်ခုကို မိမိဘာသာ အားပြတ်အောင် ပြုသည်နှင့် တူပေသည်။
တစ်ချို့က ဤကဲ့သို့ စာအုပ်မျိုး ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းကြောင့် ဆရာကြီးအား အပြစ်တင်လိုကြသည်။ အမှန်မှာ မည်သည့်ပညာမဆို မထိုက်တန်သူများ၏ လက်တွင်းသို့ အလွယ်တကူ မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ ရောက်ရှိခဲ့လျှင်လည်း အပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲ အပိုင်းအစမျှသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် လူဆိုး၊ သူခိုးတို့သည် ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ ရှိသူများမဟုတ်သဖြင့် ခိုးဆိုးနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗန်တို၊ ဗန်ရှည်ပညာကို ငွေကြေးတစ်ခုတည်း ပေးနိုင်ရုံမျှဖြင့် တတ်မြောက်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုက်တန်သော အချိန်၊ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ၊ သည်းခံမှုများနှင့် အစဉ်တစိုက် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှသာ အမှန်တကယ် တတ်မြောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ယခုစာအုပ်ကို ဆရာကြီးမှ ရဲရဲကြီး ရေးသားထုတ်ဝေပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင် ဗန်တိုနည်းပေါင်း ၁၂၀၊ ဗန်ရှည်နည်းပေါင်း ၁၄-နည်း တို့ကို ရုပ်ပုံပေါင်း ၁၆၄-ပုံဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြပေးထားသည်။ အကျယ်ဆိုရလျှင် ဤစာအုပ်တွင် ဗန်တို၊ ဗန်ရှည်ပညာ လိုက်စားသူတို့အတွက် ရန်သူနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် အမှန်အကန် အသုံးဝင်မည့် နည်းကောင်း (၁၆)နည်းကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ ဤစာအုပ်တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော အားနည်းသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၊ အားရှိသော ခန္ဓာလက်နက်များကိုလည်း ဖော်ပြပေးထား သည်။ ထို့ပြင် ဗန်တိုပညာအနေဖြင့် ခန္ဓာလက်နက်များဖြစ်သော လက်ဝါးစောင်း၊ လက်ဖနောင့်၊ တံတောင်၊ ဒူး၊ ခြေဖနောင့်၊ ခြေ၀ါးစောင်း၊ ခေါင်း၊ လက်သီး၊ လက်စောင်းတို့ အသုံးပြုနည်းများကို အကျယ်ရှင်းပြထားသည်။
ဗန်ရှည်ပညာရပ်အနေဖြင့်လည်း လက်အဖြောင့်ထိုးခြင်း၊ ဓားရိုးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မိုးခုတ်ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ပိုင်းခုတ်ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ တွတ်ခုတ်ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လက်နက်အကျချနည်း၊ တက်ရှောင်ပြီး လက်နက်အကျချနည်း၊ တက်ရှောင်၍ အောက်စီးမှတိုက်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမှန်တစ်ကယ် အသုံးဝင်မည့် နည်းစနစ်များကို ဖော်ပြပေးထားသည်။
ထိုမျှမကသေး အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးအလေးပေးကာ အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားသေးသည်။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍတွင် လက်ဝါးစောင်း သုံးနည်း၊ လက်ဖနောင့်ဖြင့် ခုခံနည်း၊ တံတောင်ဖြင့် တိုက်နည်း၊ ခြေဖ၀ါး ဖနောင့်ဖြင့် ခုခံတိုက်ခိုက်နည်း၊ လက်စောင်းဖြင့် ခုခံနည်း၊ လက်မဖြင့် ခုခံနည်း စသည်ဖြင့် စုံလင်လှသည်။
လက်တွေလေ့လာ လေ့ကျင့်လိုသူတွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖတ်ရှုလိုသူတွေ အတွက်ဖြစ်ဖြစ် အမှန်အကန် စိတ်ကျေနပ်မှုပေးစွမ်းနိုင်မယ့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ကူးယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
Posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book, Pwe Kyaung	| Tagged စာအုပ်, ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, ဦးချစ်သန်း	|9Replies
ဘီလီဝုဒ် ၏ နဘမ်းသတ်နည်း (ဦးလှဒင်)
Posted on May 15, 2013 by Aung Thu Htet
ဆရာကြီး ဦးလှဒင် ဘာသာပြန်ဆိုသော ဘီလီဝုဒ် ၏ နဘမ်းသတ်နည်း စာအုပ်ဖြစ်သည်။
Wrestling Techniques of Billy Wood
အောက်မှာ မူရင်းစာအုပ်မျက်နှာဖုံးကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Wrestling: Catch-As-Catch-Can, Cumberland & Westmorland, & All-In Styles
Ernest John Harrison ရဲ့ Wrestling: Catch-As-Catch-Can, Cumberland & Westmorland, & All-In Styles ကို ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပါစာအုပ်ကို ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲယူ ရရှိနိုင်ပါပြီ…
Posted in Jiu-Jitsu, Judo, Martial Arts, Martial Arts Book, Wrestling	| Tagged ဂျူဂျစ်ဆု, ဂျူဒို, စာအုပ်, နပန်း, ဦးလှဒင်	| 1 Reply
Posted on April 22, 2013 by Aung Thu Htet
ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့် ဘာသာပြန်သော အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းစနစ်များသည် ဂျူဒို၊ ဂျူဂျစ်ဆု၊ နပမ်း၊ ဆာမားတေး စသည့် ကမ္ဘာ့အထက်မြက်ဆုံး ကိုယ်ခံပညာများမှ ကောင်းနိုးရာရာ နည်းစနစ်များကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ကျရောက်နေသော အခြေအနေများတွင် အမှန်ပင် အသုံးဝင်သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ စာအုပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း အခန်း(၆)ခန်း ပါဝင်သည်။
(၂) အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ
(၆) ရဲအရာရှိများအတွက် တရားခံဖမ်းနည်းများ စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။
အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲယူ ရရှိနိုင်ပါပြီ…
Posted in Boxing, Jiu-Jitsu, Judo, Martial Arts, Martial Arts Book	| Tagged ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, ဂျူဂျစ်ဆု, ဂျူဒို, စာအုပ်, ဆာမားတေး, နပန်း	| Leaveareply